Ndezvipi matombo maziso anoshamisa phenomena? Optical Illusions mumatombo
Gemstones optical phenomena
Gemstones optical phenomena zvinokonzerwa nekufamba kunoita chiedza chinoshandiswa nekristalline chimiro cheguyo. Izvi zvingaita sekuparadzira chiedza, kufungidzira, kukanganisa, kusiyana, kutora kana kutengesa.
Adularescence ibhuruu sheen chiitiko chinoratidza pane yakatarwa cabochon pamusoro peMonstone. Izvo zvinoitika zvekupenya kunouya kubva mukubatana kwechiedza pamwe netaundi ye "albite" diki makristasi mumatombo emwedzi. Ukobvu hwetete yemakristuru madiki anoona mhando yebhuruu inopenya. Wakaonda mutete, zvirinani iro bhuruu flash. Izvi zvinowanzo kuoneka seyakajeka light athari. Moonstone inonzi orthoclase feldspars, rimwe zita "selenite". VaRoma vakaitumidza kuti Astrion.
Gem cutters vanowanzosarudza kudonha maitiro emagetsi, apo mabwe akaderera. Mune matombo akadai uye matombo apo chiedza chinowira pamusoro penzvimbo ye cabochon uye chinoita nyeredzi-yakafanana nemayera, ichi chinonzi ansterism. Kune 4 ray uye 6 ray nyenyeredzi dzakacherechedza kazhinji. Izvi zvinoitika kana kutarisa kwetsono kufanana nekutora kana silika mukati mekristini kune pane imwe nhesi.
Kubva pazita rechiFrench "Chat" zvinoreva katsi. Chatoyancy inoreva chiitiko chakafanana nekuvhura nekuvhara ziso rekati. Tinogona kucherechedza mune chrysoberyl katsi ziso dombo nekujeka kukuru. Katsi ziso matombo ane imwechete yakapinza bhendi, dzimwe nguva maviri kana matatu mabhendi, anomhanya achipfuura nepakati penzvimbo cabochon pamusoro. Meso eKatsi ezvematombo mune cabochon chimiro akachekwa anoratidza chatoyancy. Tsono dzakatwasuka dzekristaro chimiro cheibwe dzinoenderana nezviitiko. Saka kana mwenje ukawira pairi, bhendi rakapinza rinogona kuoneka. Mune akanakisa kesi, iyo chatoyant chrysoberyl katsi ziso rinotaridzika rinoparadzanisa iyo nzvimbo kuita mahafu maviri. Tinogona kuona mukaka nehuchi zvinoitika kana dombo richifamba pasi pechiedza.
Iridescence inozivikanwawo segoniochromism, chinoshamisa apo nzvimbo yezvinhu zvakaratidza mavara akasiyana-siyana semakona ekuona kuchinja. Inogona kuonekwa nyore nyore mumutsipa wejiva, sopu dzemapapiro, mapapiro eflyfly, amai vemaparera nezvimwewo. Kusakanganiswa kwenzvimbo uye nzvimbo huru dzomukati kunobvumira chiedza kupfuura uye kuratidzika kumashure kubva pane dzakawanda (diffraction) zvichiita kuti mhando yakawanda zvinonyatsooneka. Yakabatana nekupindira, chigumisiro chinoshamisa. Parera yemasikirini inoratidza iridescence yakasiyana zvikuru nemuviri wayo. Tahiti maparera anoratidza kukurukurira kwemazuva ano.
Iyo inoshamisa gem inonzi opal inoratidza yakanaka ruvara. Iwo moto opals kubva kuLightening Ridge, Australia (inoratidza inoshandura zvigamba zvemavara akajeka anotarisana neasviba) inozivikanwa nezveichi chiitiko. Nepo kutamba uku kwerudzi iri mhando yeiridescence, vangangoita vese vatengesi vematombo vanoidaidza zvisizvo "moto". Moto izwi rezvigadzirwa, Kupararira kwechiedza kunoratidzwa mumatombo anokosha. Inowanzoonekwa mudhaimani. Iko kupararira kuri nyore kwechiedza. Mukana weopals haisi kupararira uye nokudaro, zvakaomarara kushandisa izwi rekuti "moto".
Muenzaniso wakanakisa wekuchinja kwemavara ndeye alexandrite. Aya mabwe uye matombo anoonekwa akasiyana zvakanyanya mu incandescent mwenje uchienzaniswa nezuva rechisikirwo chiedza. Izvi zvinonyanya kukonzerwa neakakosha makemikari anoumbwa pamwe neakasimba ekusarudza kunwa. Iyo alexandrite inoratidzika yakasvibira masikati uye zvakare inoratidzika yakatsvuka mune incandescent mwenje. Sapphire, zvakare tourmaline, alexandrite uye mamwe matombo anogona aslo kuratidza shanduko yemuvara.
Labradorescence rudzi rweridescence, asi runotungamirirwa zvikuru nemhaka yekristini twinning. Tinogona kuzviwana mubazi reraradorite.